Ingabe I-Deepfake Technology Izokuthinta Kanjani Ukuthengisa? | Martech Zone
Ngabe I-Deepfake Technology Izokuthinta Kanjani Ukuthengisa?
Uma ungakayizami, mhlawumbe uhlelo lokusebenza lweselula ebengiluthokozisa kakhulu ngalo nyaka yilolu Isingeniso. Uhlelo lokusebenza leselula likuvumela ukuthi uthathe ubuso bakho uphinde ubuyise ubuso banoma ngubani kwesinye isithombe noma ividiyo ngaphakathi kwe-database yabo.
Kungani Ibizwa Nge-Deepfake?
Deepfake kuyinhlanganisela yemigomo Ukufunda Okujulile futhi Fake. I-Deepfakes isebenzisa amandla okufunda komshini nobuhlakani bokufakelwa bokukhohlisa noma ukukhiqiza okuqukethwe okubonakalayo nokulalelwayo okunekhono eliphakeme lokukhohlisa.
The Isingeniso Isicelo seselula silula ukusebenzisa futhi imiphumela ingaba mnandi impela. Ngizokwabelana ngeminye yemiphumela yami lapha. Inothi eliseceleni… azikhohlisi kakhulu, ziyaphoxa nje, ziyesabeka, futhi ziyahlekisa.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu Douglas Karr (@nomfundo_m)
Landa i-Reface App
Ngabe Ama-Deepfakes Ayesabeka Ngaphezu Kokuhlekisa?
Ngeshwa, siphila ezweni lapho ukwaziswa okungaziwa kahle kudlange khona. Ngenxa yalokhu, ubuchwepheshe be-deepfake bungase bungasetshenziswa njalo entweni engenacala njengongenza ngidanse noma ngidlale kumabhayisikobho… nazo zingasetshenziselwa ukusabalalisa ulwazi olungaziwa.
Cabanga nje, isibonelo, izithombe, umsindo, noma ividiyo esebenzisa ubuchwepheshe obunzulu ukusetha usopolitiki. Noma ngabe ikhonjwe njenge-deepfake, umphumela ungahamba ngejubane lemithombo yezokuxhumana ukukhohlisa umbono wabavoti. Futhi, ngeshwa, iphesenti elikhulu labavoti - ngenkathi lincane - lingakukholwa.
Nayi ividiyo enhle evela ku-CNBC ngesihloko:
Njengoba ungaqaphela, abalawuli kanye nobuchwepheshe bokubona sebudume kakhulu ukuzama ukulwa nobuchwepheshe bokujula. Akungabazeki ukuthi kuzoba mnandi…
Angasetshenziswa Kanjani Ama-Deepfakes Ekumaketheni?
The ubuchwepheshe bokukhiqiza imithombo yezindaba ejulile ngumthombo ovulekile futhi uyatholakala kuyo yonke iwebhu. Yize sikubona kwifilimu yesimanjemanje (amavidyo kaCarrie Fisher avela ngawo-1970 asetshenziswa ku-deepfake eRogue One), asikaze siwabone ekumaketheni… kodwa sizowabona.
Ukwethenjwa kubalulekile kunoma yibuphi ubuhlobo phakathi komthengi nomkhiqizo. Ngaphandle kwezingqinamba ezisemthethweni, noma yiliphi ibhizinisi elibheke ukufaka ubuchwepheshe obujulile emizamweni yabo yokuthengisa nokumaketha kuzofanele ihambe kancane… kepha ngiyawabona amathuba:
Imidiya eyenziwe ngezifiso - imikhiqizo ingakhiqiza imidiya ngenhloso yokuthi amakhasimende ayo azifake. Cabanga nje abasiki bengqephu, ngokwesibonelo, abenza umuntu akwazi ukufaka ubuso nobuso bomzimba wakhe kuvidiyo yomgwaqo. Babekwazi ukubona ukuthi imfashini ibukeka kanjani ngokubonakalayo (ngokunyakaza) ngaphandle kokuzama ukugqoka.
Imidiya ehlukanisiwe - ukurekhoda nokuhlela amavidiyo kungabiza kakhulu futhi imikhiqizo ibhekisisa kakhulu ukumelwa kwabantu kanye namasiko akhonjiswayo. Esikhathini esizayo esiseduze, umkhiqizo ungaqopha ividiyo eyodwa - kepha usebenzise ubuchwepheshe bokujula ukuze uhlukanise umlayezo ukumela ukubalwa kwabantu namasiko ahlukene kuwo.
Hlanganisa ividiyo - imikhiqizo ingahle ibe nabamele abathengisi bayo noma abaholi abalingisa kumavidiyo angama-deepfakes kodwa enziwe ngezifiso ukuxhumana ngqo nethemba noma iklayenti. Lolu hlobo lobuchwepheshe seluvele luyatholakala ngeplatifomu I-Synthesia. Yize ngikholwa ukuthi ama-brand kufanele adalule ukujula, le kuyindlela edonsa amehlo yokukhuluma ngqo kumuntu ngamunye uqobo.
Imidiya ehunyushiwe - Imikhiqizo ingasebenzisa abathonya kuzo zonke izilimi. Nasi isibonelo esihle sikaDavid Beckham - lapho ukufana kwakhe kuzoheha ukunakwa, kepha umyalezo uhunyushwe kahle. Kulokhu, basebenzisa amanye amazwi nobuchwepheshe be-deepfake ukunyakaza komlomo… kepha futhi bebengasebenzisa futhi i-deepfake ukufaka esikhundleni somsindo.
Kuzo zonke lezi zibonelo, i-deepfake ayikho lapho ukukhohlisa kepha ukuthuthukisa ukuxhumana. Kungumugqa omncane… futhi amabhizinisi kuzofanele aqaphele ukuhamba kuwo!
Ake sikuqede lokhu ngenothi elihle…
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana nesixhumanisi se- Faka isicelo. Ngincoma kakhulu uhlobo olukhokhelwe olunikeza ithoni yemidiya eyengeziwe ukuze ungcolise nayo.
Tags: lobulunguukufunda okujulilefakaubuchwepheshe obukhululungisa kabusha
I-AudioMob: Faka Izentengiso Zonyaka Omusha Ngezikhangiso Zomsindo